वसिवियांलेा डायरी | manka kura
« तिमी त गै गयैा
उस्केा सपना ( कथा )भाग १ »
विकशीत देशहरूकका नराम्रा कुरामात्र हामी किन सिक्ने । ती देशले गरेका राम्रा राम्रा कामकुराहरू पनि हामीले किन नसिक्ने । हाम्रेा देशका धेरै नेताहरू , शक्तिका कुर्सीमा वसेका धेरै पदाधिकारीहरू र विविध क्षेत्रका मानिसहरू रास्ट्रकेा प्रतिनिधित्व गर्दै भ्रमण,सेमिनार, गेास्ठी अादि अादिमा भाग लिन विश्वका धेरै ठाउंहरूमा पुग्ने गरेका छन् । तीन्ले त्यहां देखिएका राम्रा कुराहरू नेपालकेा परिवेशमा सुहांउदेा किसिमले विविध क्षेत्रमा किन लागू गर्न नखेाजेकेा हेालान् वा प्रयत्न सम्म नगरेका देख्दा भने अचम्म नै लाग्येा । वरू जंगवहादुरले वेलायत यात्रा गर्दा देखेका कुराहरूले उनलार्इ प्रभावित पारेपछि तत्कालिन समयमा केही गरेर देखाएका थिए । अहिले त विश्व यति सांगुरी सक्येा कि कहां के भै रहेकेा छ सवै कुरा विज्ञानले गर्दा यही वसेर थाहा पाउने र हेर्नै सकिने भै सकेकेा अवस्थामा पनि हामी कहां सवै कुरा कुनै येाजना विनानै स्वस्फुर्त तरिकाले मात्र संचालन भै रहेकेा छ । राज्यले यी यी क्षेत्र मा यती वर्षभित्र यस्तेा यस्तेा वनाउने वा यस्तेा हुन्छ भन्ने कुनै येाजना छैन । पशुपतिनाथले जता लग्लान् त्यतै पुगैाला भन्ने हिसावले सवै क्षेत्रमा कार्य भै रहेकेा छ । हुन पनि अाज सम्मका विकास निर्माण त्यस्तै गतिले भै रहे जस्तेा मात्र लाग्छ ।
मैले एरिजेाना स्टेटकेा टुसान शहरमा देखेकेा पार्क सम्वन्धी केही कुरा टांसेाकेा रूपमा राख्न खेाजेकेा छु ।
सामान्यत यहां सवै सरकारी विध्यालयकेा हातासंगै जेाडिएकेा अर्केा ठूलेा पार्क पनि हुंदेा रहेछ । म वसेकेा एपार्टमेन्ट अगाडी Menlo Park Elmentry School केा हातासंगै जेाडिएकेा Menlo Park छ । त्यस पार्कलार्इ तारजाली ले घेरे पनि सामान्यतया खुल्ला नै छ । जेा सुकैले पनि सजिलै प्रयेाग गर्न पाउंछन् । त्यस पार्कमा फुटवल ( Socker ) ground देखि लिएर अन्य विभिन्न खेलहरू खेल्न सकिने प्रयाप्त चैार ( प्राय सवै पार्कका चैारहरूमा राति खेल्न मिल्ने गरि वनार्इएकेा ) छ । खेल वाहेक पार्ककेा छेउ छेउ मा वस्न वा फास्टफूड लिएर खान वस्न मिल्ने गरि मेच टेवलहरू (सिमेन्ट कंक्रिटकेा ) रूखका छहारीमुनि रहेका छन्र । पार्ककेा एउटा छेउमा व्यवस्थित सार्वजनिक शैाचालय पनि छ । पार्क ज्यादै सफा र हरियेा गलैंचा अेाछ्याए जस्तेा गरेर समय समयमा घांस काटेर मिलार्इएकेा देखिन्छ । येा पार्ककेा चैार मात्र यस्तेा हेाइन प्राय सवै पार्कका चैारहरू यस्तै हरिया लचकदार गलैंचा अेाच्छाइए जस्तेा छ । प्राय यहां खेलहरू रातका समयमा , सांझपख हुंदेा रहेछ । पार्कसंगै प्रसस्त गाडी राख्न मिल्ने गरि पार्किङग एरिया छुट्याइएकेा छ । हरेक पार्कमा केटाकेटीहरूकेा लागि विविध मनेारन्जनयुक्त खेल सामाग्रीहरू राखिएकेा हुंदेा रहेछ ।
टुसान सहर महानगर पालिका हेा । महानगर पालिका भित्र यस्ता ठुला पार्कहरू वीसैाकेा संख्या भन्दा वढीनै छन । अर्थात जता पुगे पनि ठुला ठुला पार्कहरू देख्न सकिन्छ । पार्क मात्र हैन टुसान शहर भित्र वीसैाकेा संख्या भन्दा वढी साना ठुला पुस्तकालय रहेका छन् । सवै पार्कहरू र पुस्तकालय मानिसले निर्वाधरूपमा प्रयेाग गर्न सक्छन् । शनिवार र अाइतवार त हरेक पार्कमा ठूला वा केटाकेटीहरूका विभिन्न खेलहरू भै रहेका देखिन्छन् । सवै पार्कहरू विहान ६ वजे देखि वेलुका दश वजे सम्म मात्र सर्वसाधारणले प्रयेाग गर्न पाउछन्र ।
काठमडैामा वस्दा टुंडिखेल वाहेक ठूलेा चैार नदेखेकेा मलार्इ यहां ठाउठाउंमा जतागय पनि यस्ता पार्क र हरिया चैार देख्दा नेपालमा पनि यस्तेा सार्वजनिक पार्कहरू भए खेलकेा कति विकास हुन्थ्येा वा मानिसहरू कति स्वस्थ्य् हुन्थे हेालान् ?। हामीकाहां राज्यले यस तर्फ पटककै सेाचेकेा देखिदैन केवल घर र वस्तीहरूले मात्र शहर सांघुरिंदै गएकेा छ । अझ यी पार्कहरू संधै सफा देख्दा भने निकै कैातहुल जागथ्येा । कसरि सफा राखिएकेा हेालान् भनेर । हरेक दिन पार्कहरू सफा राख्न ,फेाहर टिप्न, ट्वार्इलेट सफा गर्न एक जना मानिस गाडीमा अाफुलार्इ चाहिने अैाजारहरू लिएर अाउने र सफा गर्ने गर्दा रहेछन्र । पार्कका वरीपरी रहेका गार्वेज वक्सकेा प्लास्टीक भित्र जम्मा भएका फेाहरहरू लिएर जाने , गार्वेज व्याग फेरिदिने गरिदेा रहेछ । मानिसहरूकेा सरसफार्इ प्रतिकेा चेतनास्तर उन्नत भएकेाले फेाहर जहां पायेा त्यहा फालिहाल्दैनन् । तेाकिएकै स्थानमा फ्याल्ने वानि भएकेा हुंदा र दैनिक राम्ररी सफा गरिने भएकाले पार्कहरू, वाटेाघाटेा सफा देखिन्छ । चैारमा रहेका , फेाहर वा कागज अादि टिप्न पनि ननिहुरिकन हातैवाट चलाउन मिल्ने लठृी जस्तै चिम्टाले भुंर्इकेा फेाहर टपटप टिपी झेालामा वटुलिंदेा रहेछ । पार्कभित्र रहेका रूख विरूवा वा फूल फूल्ने जातिका घांसका वुट्यानहरू पनि छ्वाली जस्ता पार्इपवाट सिंचन गरिदेा रहेछ । यसवाट पानीकेा वचावट र वीरूवा संधै हरियेा राख्न मद्त पूगने रहेछ । चैारकेा चारैतिर विहान विहान फेाहरावाट पानी दिएर चैारलार्इ संधै हरियाली वनाइन्छ । साता पन्ध् दिनमा विभिन्न खालका मेसिन गाडीवाट घांस काटेर चैारलार्इ लचकदार हरियेा कार्पेट अेाच्छ्यार्इय जस्तेा गरि राखिन्छ ।
यहांकेा पार्ककेा हरियेा चैारमा गएर जव वस्छु अनि म काठमाडैाकेा मुटु राजधानीकेा छाति टुंडिखेल सम्झन्छु । त्येा शहीद पार्क र टुंडिखेल वा रत्नपार्क यसरीनै हरियेा र सफा वनाउन सके हाम्रेा राजधानीकेा मुहार कस्तेा हेाला । टुंडीखेलमा वर्षभरी सेना केा रेखदेखमा घांस पालेर दशैं अाउनु अगाडी सयैा सैनिक जवानहरूलार्इ घुंडा धसायर हंसियाले घांस कटाउन लगार्इन्छ । जवानहरूकेा करामत हामी टुंडिखेलकेा वारमा झुम्मिएर अाज सम्म पनि रमिता हेर्दै अाइरहेका छैा । चैारकेा छेउ छेउ वार अासपास सिस्नु देखि लिएर, वनमारा झार अनि कुरेाका अग्ला ढड्डीहरूले हाम्रेा पैारख र सभ्यतालार्इ गिज्यार्इरहेकेा जस्तेा लाग्छ । जस्केा जिम्मेवारी भित्र त्येा छेत्र पर्छ त्यसले टुंडिखेल अथवा हाम्रेा सानेा शहर भित्र रहेका केही पार्ककेा संरक्षण गर्ने हरियाली राख्नसके, त्यसवाट मानवजातिले वढी भन्दा वढी फाइदा उठाउन सक्ने सेाच लिएर काम गरिदिने हेा भने नहुने के छ र । दैनिक सिंचनकेा लागि काठमाडैा वासीले फालेकेा पानीलार्इ संकलन गरि यस्ता स्थानमा प्रयेाग गर्न सकिदेा हेाला । घांस काट्ने मेसिन अैजार त्यस्ता संस्थाले झिकाएर समय समयमा चलाउनु ठूलेा कुरेा हेा जस्तेा लाग्दैन । केवल हाम्रेा सेाचकेा मात्र कमि जस्तेा लाग्छ । फेाहर जथाभावी नफाल भनेर मात्र हुदैन वाटेा घाटेा पार्क, वसपार्क वा मानिसकेा जमघट हुने स्थानहरूमा फेाहर राख्ने गार्वेज त्यहां राखिदिने र दैनिक फेाहर भए पनि नभएर पनि उठाउने व्यवस्था मिलाउन सके मानिसले जथाभावि फेाहर फाल्न छाडी गार्वेजवकसमा राख्ने वानी वस्दै जान्छ। अहिले सम्म टुंडिखेलवाट जनताले व्यवस्थित रूपमा उपयेाग गर्न र त्यसवाट के फार्इदा लिने त्यस्तेा सेाच हामीले वनाएका छैनैा । पहिलेा त्येा हरियाली हुनुपर्छ । फेाहर रहित हुनु पर्छ । शहर वासी वा अरू वटुवाले केही क्षणा अाराम गर्न सक्ने वा भेट घाट गर्न सक्ने गरि छेउ छेउमा सिमेन्टका स्थायी रूपमा मेच टेवल वनाएर राखिदिने , छेउ छेउमा साना जातका हरियाली हुने रूखहरू व्यवस्थित रूपले लगार्इदिने र फेाहर जथाभावी नफ्रयाली तेाकिएकेा ठाउंमा फ्याल्न सूचना गर्ने , फ्याले कारवाही हुने सूचना गर्दै जाने हेा भने हामीमा सभ्य वानि वस्दै जान सक्छ ।
यता हेरेपछि जनताकेा स्वास्थ्य र खेलकूदका लागि ठाउं ठाउंमा वनेका पार्क , विश्रामस्थलका लागि पार्क र वसपार्क मा रहेका अारामदायी वस्ने ठाउं र ,विहानी घुमफिरका लागि मात्र वनेका नदि किनार र पहाडी भेगका सार्इकलयात्री र पैदल हीडडुल गर्न वनेका सडकहरू हेर्दा त हामी कहां राज्यले जनताकेा लागि केही नगरेकै जस्तेा भान हुंन्छ ।
पहिले पहिले हाम्रै पुर्खाले धर्म कमाउने , मानवकेा सेवा गर्ने उदेश्यले वटुवाहरूकेा लागि ठाउं ठाउंमा घ्याम्पेामा पानी राखेर सेवा गर्थे ,पछि हामी सभ्भे भएका वहानामा यस्ता कुरा पाच्य नभएर हेाला अाज देखिदैन । तर यता त्येा परम्पराले अाधुनिकतामा फेरिएर जनताकेा सेवा निरन्तर गरेकेा पाए । येा देखेर मलार्इ हाम्रा पुर्खादेखि गैारव लागेर अायेा । वस पार्क जानुस्, लार्इव्रेअरी जानुस, वा विभिन्न पार्कहरूमा जानुस ,रेस्टएरियामा जानुस्, सार्वजनिक खानेपानीका लागि अाधुनिक धाराहरू रहेका देखिन्छन् । सेलेाफेान र ल्यान्डफेानकेा व्यापकता भए पनि सार्वजनिक टेलिफेान सेवाहरू जताततै देखिन्छन् । यी राम्रा कुराहरूकेा के हामीले सिकेा गर्न सक्दैनैा । त्यहां देखिएका राम्रा कुराहरू नेपालकेा परिवेशमा सुहाउंदेा किसिमले किन लागु नगरेकेा हेालान् वा प्रयत्न सम्म किन नगरेका हेालान् मलार्इ अाश्चर्य लाग्येा ।
काठमाडैा भित्र वा गाउंमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरू जेागाउन सकिएकेा छैन । भु माफियाहरूले राज्यवाटै वल र टेवा पाएर दिन पर दिन सार्वजनिक सम्पत्तिहरू व्यक्ति विशेषका हातमा जांदैछ । काठमाडैा शहरभित्र अापत विपत पर्दा जम्मा हुन्र खुल्ला स्थान सम्म छैन । अागलागी पर्दा दमकल लाने राख्ने ठाउं छैन । विरामी पर्दा एम्वुलेन्स भनेकेा ठाउंमा पुर्रयाउन सकिदैन । यस्तेा अव्यवस्थित वसेावास छ। हिजेा वनेका पुराना वस्तीमा त यस्तै भयेा भनैा तर अाज वन्ने अावास क्षेत्रकेा पनि यस्तै चाला छ । खाली कंकि्टकेा थुप्रेा मात्र देखिन्छ । हरियाली कतै देखिदैन । भेाली ती अावास क्षेत्रपनि अाजकेा काठमाडैा केा पुरानेा टेाल जस्तै मात्र हुने देखिएकेा छ ।सडक फुटपाथमा भएका हिजेाकेा पुर्खाले जेाहेा गरेका रूख विरूवाहरू पनि अाज हामीले विभिन्न वाहानामा नास गरि शहरलार्इ अझ कंक्रिटमय वनाउंदै गै रहेका छैां । मैले विकशीत देशका ती शहरकेा फुटपाथमा रूख नरेापेकेा कतै देखिन । हाम्रा सवै सडककेा दाया वाया उपयुक्त रूखहरू रेापेर हरियाली पार्न सकिदैन र । यस्ले हाम्रेा शहरकेा स्वभा वढ्नुकेा साथै हरीयाली र शहर सुन्दर अनि वातावरणिय हिसावले पनि त राम्रै देखिन्छ ।
This entry was posted on अप्रील 3, 2010 at 11:11 बेलुका and is filed under वालकथा.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.